Nke a bụ otú o si eji ọkụ ọkụ nke Elon Musk chọrọ ire ere | Akụkọ akụrụngwa
Elon Musk karịrị Tesla na Space X. Anyị na-ahụkarị tweets nke ọ dị ka ọ chọrọ ịnọnyere ndị na-eso ụzọ ya. Ọnwa ole na ole gara aga o zipụrụ tweet jiri akara ekwentị gịN'ezie n'ihi na ọ bụghị nke ezigbo ebe ọ bụ na igwe nzaghachi na-aza mgbe niile. Obere afọ gara aga, o kwuru na ya ga-enwe ike mepụta ọwara ka o wee nwee ike ịga ọrụ n’enweghị ahụhụ ndị ahụ na-enwe obi ụtọ na njem na California, ọrụ a na-anwale ugbua.
Na mbido Disemba, o kwuputara na ọ bụrụ na ọ ree ụlọ ọrụ 50.000 ụlọ ọrụ ya bụ The Boring Company, ihe ọzọ ọ ga - eme ga - abụ ire ọkụ. Naanị n’ime ụbọchị iri na ise, o rere okpu ya niile ma kwenye na ọrụ ọzọ nke ụlọ ọrụ ya na-agwụ ike ga-abụ onye na-ere ọkụ. N'ihi ire okpu ndị ahụ, o jisiri ike nweta otu nde dọla nke o ji nwee ike iji kwụọ ụgwọ ọkụ ọkụ a ga-ere n'oge na-adịghị anya.
Onye oku a n’igwe oku abughi ihe obula ihe agha gbanwere na ikuku gas. Amaghị m ókè ole ndị ọchịchị America ga-ekwe ka ngwaahịa a rute n'ahịa, mana na tiori, ọ bụrụ na Ilọn Musk etinyela oge ya na ego o mere site n'ahịa nke okpu na-agwụ ike, dịka ọ kpọrọ ha, ọ kwesịrị enweghi nsogbu obula ma obia n’ire ya.
Ọnụ nke onye a na-enwu ọkụ ga-abụ dollar 600. Ruo izu ahụ, ịnwere ike ịnweta weebụ ebe a ga-eresị ngwaahịa a. Weebụ, chọrọ ka anyị tinye paswọọdụ, paswọọdụ ruo ụbọchị ole na ole gara aga bụ "ire ọkụ" dịka ọtụtụ eri Reddit, mana ọ dị nwute na ha agbanweela ya ma ugbu a ha achọpụtaghị ihe paswọọdụ ọhụrụ ahụ bụ. Mwepụta nke flamethrower bụ ndokwa maka Eprel afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Nke a bụ otú o si eji ọkụ ọkụ nke Elon Musk chọrọ ire
Nissan na-ewebata slippers mbụ na-adọba ụgbọala